Izezimali zedijithali ezisha kakhulu ngo-2021. Izimali zakamuva zedijithali zivele October 2021.
Izimali ze-digital ezihamba phambili ezingu-10 ezivelele ezivele ezimakethe zemali yedijithali ezinsukwini zamuva.
Izindleko ze-digital ezisha kunazo zonke October 2021
Kintaman (KINTA) 19/10/2021
ScareCrow (SCARE) 19/10/2021
Zeptagram (ZPTC) 19/10/2021
Binance8 (B8) 19/10/2021
DenDomains (DDN) 19/10/2021
Super Music League (SML) (SML) 19/10/2021
Sewer Rat Social Club CHIZ Token (CHIZ) 19/10/2021
Fruit Fighters (FOOFIGHT) 19/10/2021
Eutaria (EUT) 19/10/2021
Scream (SCREAM) 19/10/2021
Falcon Swaps (FLNS) 19/10/2021
UpCake (UPC) 19/10/2021
TTcoin (TC) 19/10/2021
Treat DAO [new] (TREATDAONEW) 19/10/2021
Graphene (GFN) 19/10/2021
I-idijithali yemali entsha yi-online service cryptoratesxe.com, eshicilela uhlu lwama-cryptocurrensets asanda kuvela, kepha athengiswa ngokushintshaniswa kwe-crypto.
Insiza ye-inthanethi "entsha ye-idijithali yemali" isebenzisa imithombo evulekile evela ekushintshaniseni kwe-idijithali yemali futhi ihlanganise isilinganiso se-crypto entsha ngesikhathi sangempela.
Sichaza i-idijithali yemali entsha njengohlobo lwemali olwakhiwe ngesisekelo semigomo ye-digital crypto, kepha engakaze ivele ekuhwebeni kokushintshana.
Ama-Cryptocurrensets avela njalo, kepha uqala ukuzungeza phakathi kwabantu lapho okwenziwayo ekushintshiselweni kuqala ukwenzeka. Kusukela umzuzu wokuhweba i-pair yokuqala yokuhweba, sibhalisa i-idijithali yemali entsha futhi siyishicilele ohlwini lwama-izimali zeDividenti amasha.
Ngokungafani nensizakalo ye- "Imali yamuva yedijithali", ekhombisa amanani entengo yemali eyodwa yohlobo lwe-idijithali yemali olusanda kuvela, Imali engabizi kakhulu yedijithali insiza ikhombisa izindleko zawo wonke ama-cryptocurrensets ngentengo ephansi.
I-idijithali yemali entsha, noma kuseshini yokuqala yokuhweba, ingahle ingabi yimali eshibhile kunazo zonke.
Uhlu lwama-cryptocurrensets akamuva ashintsha njalo. Ukuvela kwe-crypto entsha kwenzeka kanye ngosuku noma kanye ngesonto noma kanye ngenyanga.
Sebenzisa insizakalo yethu "i-idijithali yemali entsha" online futhi mahhala!
Ama-cryptocurrensets amasha we October 2021 kusukela 21/10/2021 amelelwa ngokukhethwa kwama-cryptos awo amasha ayi-10 ngokuhlela ukuhleleka kusuka kokusha kakhulu ukuze akhule.
Inoveli ye-crypto yethulwe ngendlela yosuku lokuqala kokuthengiswa kokuqala kwalemali kunoma yikuphi ukushintshaniswa kwe-idijithali yemali emhlabeni.
Uhlu lwama-cryptocurrensets amasha wethulwa namuhla nge October 2021.
Kungenzeka ukuthi kusasa kuzovela i-cryptocurren entsha futhi isilinganiso sama-cryptocurrensets amasha azohluka kusasa.
Hlala uvakashela iwebhusayithi yethu ukuthola imininingwane emisha maqondana nama-cryptocurrensets amasha asemsebenzini emisha yanamuhla.
Izindleko ze-digital ezisha kunazo zonke 2021
Ama-cryptocurrensets amasha we 2021 ama-izimali zeDividenti avele kuphela ngaphakathi 2021.
Ama-izimali zeDividenti amasha avela kaningi. Kwesinye isikhathi ama-cryptocurrensets amasha angavela ngosuku olufanayo. Kepha isici esibaluleke kakhulu ukuthi le krokhethi iyathengiswa nokuthi isebenza kangakanani.
Kungani sidinga i-idijithali yemali entsha engathengwanga futhi ithengiswe, engadingi muntu?
Sichaza ama-izimali zeDividenti amasha we 2021 njengezimali ezingekho 2020, futhi ngaphakathi 2021 bathengiswa ekushintshelaniseni okungenani kanye.
Sithatha usuku lokuzalwa lwe-idijithali yemali njengosuku okwathengiswa ngalo okokuqala emakethe yokushintshana ye-idijithali yemali.
Uma ku 2021 kwakungekho mabhangqwana wokuhweba we-crypto kunoma yikuphi ukushintshana emhlabeni, khona-ke asifaki i-crypto enjalo ohlwini lwama-cryptocurrensets amasha ku 2021.
I-idijithali yemali entsha
I-idijithali yemali entsha yi-crypto, engakaze ithengiswe ngokuhwebelana, kepha okuthengiswayo kuyo kuye kwabanjwa okungenani kanye.
Abatshalizimali abaningi bazama ukuthola ama-cryptocurrensets amasha. Amandla wokuhweba we-cryptocurrensets entsha uvame ukusebenza kakhulu. Uma ujoyina indali ye-crypto entsha, khona-ke ungaphatha ukuthenga i-crypto ngenani eliphansi kakhulu. Kwenzeka ukuthi isilinganiso se-idijithali yemali entsha sikhula ngokukhuthele.
Abatshalizimali abasebenza nama-izimali zeDividenti amasha kwesinye isikhathi bathola inzuzo eyengeziwe. Kodwa ubungozi bokutshala imali ku-idijithali yemali entsha nayo iphakeme.
Kubalulekile ngokwanele ukuba ngomunye wabokuqala ukuthola ukuthi imali entsha ivele nini ekuhwebeni kwe-crypto.
Kulokhu, insizakalo yethu eku-inthanethi "i-idijithali yemali entsha" yenziwa. Sebenzisa insiza entsha ye-idijithali yemali kumahhala.
Ithebula le-izimali zeDividenti entsha
Ithebula le-izimali zeDividenti yakamuva liyindlela yedatha yohlu lwethu lwe-izimali zeDividenti entsha.
Ithebula le-crypto entsha libonisa igama le-idijithali yemali kanye nosuku lendali yalo yokuqala.
Uma uchofoza enye yama-cryptocurrensets amasha etafuleni, uzoqondiswa kabusha ekhasini lemininingwane elinemininingwane lwale idijithali yemali entsha.
Ishadi lama-izimali zeDividenti amasha
Ishadi lamanje le-cryptocur lwemali kungenye ithuluzi lamahhala online elibonisa uhlu nezindleko zama-cryptocurrensets amasha.
Igrafu ye-izimali zeDividenti entsha ikhombisa isilinganiso se-10 ephezulu ye-10 ngokwemiphumela yokuhweba ngokushintshaniswa kwe-idijithali yemali.